Liquid (Mvura) Level Meter, Radar Current Meter uye Flow Meter, China Liquid (Mvura) Level Meter, Radar Current Meter uye Flow Meter Manufacturers, Suppliers, Factory - HNAC Technology Co., Ltd
Imba>Products Supplier>Measurement Meter
Mamita ekuyeresa anosanganisira zvigadzirwa zvitatu: mvura (yemvura) nhanho yegeji, radar yekuyerera mita uye yekuyerera mita. Izvi zvinotevera sumo yakadzama yezvigadzirwa:
1.Liquid (Mvura) Level Meter: Ndiyo isingabatanidzi planar millimeter wave radar level gauge yekuyera kwemvura yepamusoro, iyo inogamuchirwa frequency modulated continuous wave radar (FMCW) teknolojia yekuyera chiyero chemvura. Haina kukanganiswa ne tembiricha gradients, mhute yemvura pamusoro pemvura, zvinosvibisa mumvura, uye sediments panguva yekuyera; iyo yakagadziridzwa algorithm inogona kuita kuti kuyerwa mhedzisiro kuve kwakanyatsojeka, iyo ine hunhu hudiki saizi, kuisirwa nyore, uye kuderera kugadzirisa.
2.Radar Current Meter: Zvigadzirwa zvinoshandisa K band planar microstrip array antenna ine simba rekugadzirisa uye kushandiswa kwesimba shoma. Inosanganiswa nemabasa e-vertical angle compensation, flow velocity filtering algorithm, chiratidzo chechiratidzo chesimba, RS485 / RS232 kutaurirana, kutaurirana kusina wireless nezvimwe; Mhedzisiro yekuyema yekumhanyisa haina kukanganiswa nekupisa uye kumanikidzwa kwemhepo, uye midziyo haina kukanganiswa nekuora kwetsvina uye silt, uye kushoma kukanganiswa nekukuvara kwemvura. Zviri nyore mukuvaka kwehurumende uye zviri nyore kugadzirisa; Iyo yakakosha antenna dhizaini inoita kuti mashandisirwo emagetsi adzike zvakanyanya, achidzikisa zvakanyanya izvo zvinodikanwa zvemagetsi, zvichiita kuti ive yakakodzera kuisirwa panzvimbo inodiwa yenguva refu yekuyerera kweyero.
3.Flow Meter: Iyo inoyerera yakakwana mita inoyerera yakavakirwa pane microwave tekinoroji, iyo inogamuchirwa yepamusoro K-band ndege radar tekinoroji kuyera velocity uye nhanho yemvura yemvura nenzira isingabatanidzwe. Iyo inoverengera uye inoburitsa kuyerera nekukasira uye yakaunganidzwa kuyerera kwechaiyo-nguva chikamu zvinoenderana neyakavakirwa-mukati software modhi uye algorithm. Chigadzirwa chacho chine maitiro ekushandiswa kwesimba shoma, kuvimbika kwakanyanya uye nyore kugadzirisa; Iyo yekuyera maitiro haikanganiswe nekushisa, sediment, rwizi zvinosvibisa, zvinhu zvinoyangarara uye zvimwe zvinhu.
Nzvimbo dzekushandisa dzemamita ekuyera emvura (yemvura) level geji, radar inoyerera mita uye yekuyerera mita:
1. Mvura (Mvura) Level Meter:
A. Hydrology ongororo yenzizi, madziva nemadhamu;
B. Rwizi, nzira yekudiridza, kutonga kwemafashama uye kumwe kutarisa kwemvura;
C. Kudzora mafashama emumaguta, kutema matanda uye kumwe kutarisa kwemvura;
D. Kutarisa mafashamo emvura munzvimbo dzine makomo;
2. Radar Yazvino Meter:
A. Yambiro nekukasika nekutariswa kwenjodzi dzepasi;
B. Kutariswa kwenzizi nezviwanikwa zvemvura;
C. Hydrology ongororo yekosi yenzizi, mugero wemadiridziro nekudzora mafashamo;
D. Environmental kudzivirira tsvina, pevhu sewer pombi network monitoring;
E. Kudzora mafashama emumaguta, kuongorora mafashama emumakomo, nezvimwewo.
3. Kuyerera Meter:
A. Kuyerwa kwemafambiro, mwero wemvura kana kuyerera kwenzizi, madziva, masaisai, madhamu edhamu, kuyerera kwezvipenyu, pombi dzepasi pevhu, migero yekudiridza, nezvimwewo;
B. Batsira mabasa ekuchenesa mvura, sekupa mvura yemumaguta, kutarisa kwesuweji, nezvimwewo;
C. Flow kuverenga, inlet uye outlet kuyerera kwekutarisa, nezvimwe.
Vertical Francis Turbine Yepakati uye Yakakura Capacity Hydropower Station
Speed ​​​​Regulator (Gavhuna)